Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiye Ku-xigeenka JWXO oo Kala Qaybgalay Shirkoodii Caadiga ahaa Xubnaha G/Dhexe ee ku Sugan Dalalka Pacific-ga
Gudoomiye Ku-xigeenka JWXO oo Kala Qaybgalay Shirkoodii Caadiga ahaa Xubnaha G/Dhexe ee ku Sugan Dalalka Pacific-ga
Posted by ONA Admin	/ December 30, 2014
Mas’uuliyiinta G/Dhexe Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya ee ku nool Gobolka Pacific ayaa maanta kulankoodii billaha oo lagaga baaraan dago sidii loo hormarin lahaa taageerada jaaliyadaha gobolkaas ku nool ay u hayaan halganka xaqa ah ee shacabka Somalida Ogadenya ugu jiro aayo ka talintiisa.
Kulanka ayaa lagu bilaabay ayado Quraanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Mudne Adam Ibrahim (Dakhare), Isu Duwaha jaajiyadaha Gobolka Pacificga. Kadib waxaa kulanka Furay G/Xigeenka JWXO, Mn Maxamed Ismaciil Cumar, oo faah faahiyay ujeedadda kulanka oo ah midka billaha oo ay masuuliyiinka bil walba ku kulmaan ayaga oo si weyn u qiimeeya guud ahaan abaabulka Jaaliyaadka Ogaadeenya ee Pacifica.
Waxaa qiimayn lagu sameeyay xaaladda uu halganku maanta marayo dhinac kasta. Waxaa laysla qiray in adkaysiga badan ee shacabka iyo CWXO walina diyaar u ah, guulo badan la gaadhay, balanna qaaday inay halganka wadayaan ilaa uu gobonimo uu aayihiisa ka tashado gaadho..
Waxaa la qimeeyay dhibaatada & hagar daamada marwalba lagu hayo shacabka Ogaadeenya gaar ahaan dhibaatada ay maamulada Soomaaliya ku hayaan ayaga oo marwalba hagardaamo & dhibaatayn ku haya shacabka ka soo cararay gumaysiga manaxa ah, maamuladaas oo marar badan dad shacab ah qab-qabtay si ay u raali galiyaan gumaysiga Itoobiya waxayna masuuliyiintu u arkeen in aynan wax isbadal ah ku keenaynin geedi socodka & hayaanka lagu xoraynayo dhulka Ogaadeenya.
Waxaa si weyn loo qimeeyay loogana dood siyaadada gumaysiga Itoobiya oo loo arkay qorax casar joogta. Waxay musuuliyiintu markay qiimeeyeen u arkeen in gumeysigu ku jirto kala carar & baxsad joogta ah. Maanta waxaa ku batay Itoobiya musuqmaasuqii iyo kacdoon shacab maalin kasta mudahaaraadaya oo ka dagaalamaya cabuldhinta maamulka tirade yar ee Woyaanaha.
Waxaa kale oo lagu qimeeyay xaalada Itoobiya in ay maanta ku soo uruunsantay dhaqaale uruursi iyo baryootan ay bulshada dibada kunool ee Soomalidu ka midka tahay iyo dalalka shisheeyaha ah laga urursado. Waxaan batay safaro ay dibadaha ku aadayaan iyaga oo adduunweynaha ugu baaqaya maal gashi dalka Itoobiya oo ah in ajaanib laga iibiyo dalka shacabka Itoobiya waxa lagu magacaabo “ land Grap” oo dhulkii beeraha lahaa oo dhan laga la siiyay shirkado ajaanib ah isaga oo shacabkii Itoobiya ay la’yihiin waxay cunaan.
Masuuliyiintu waxay aad u bogaadiyeen shirweynihii Haweenka Ogaadeenya ee sadexdii malmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Copenhagen ee Denmark, shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dad aad u badan oo qaaradaha aduunka ka kala yihin laguna soo bandhigay arimo badan oo guul weyn u noqotay guud ahaan Haweenka Ogaadeenya gaar ahaan shacabka Ogaadeenya, waxayna mamuuliyiintu aad u bogaadinayaan una soo dhaweynayaan go’aamadii ka soo baxay shirkaas.
Ugu dambayntii shirkan oo ahaa mid arimo badan lagu soo bandhigay waxbadana lagu qimeeyay ayay masuuliyiinta JWXO ee Paficiga ku soo dhameyeen guul & farxad.